Dhirta cayayaanka | February 2020
Ugu Weyn Ee Dhirta cayayaanka
Ubaxa Rafflesia: helitaanka ubaxa ugu weyn
Ubaxa ugu weyn adduunka, ka weyn 1 mitir dhexdhexaad ah iyo miisaankiisu yahay 10 kg ama ka badan, waxaa lagu magacaabaa rafflesia. Noocyada aan caadiga ahayn ee dhirta ah waxay la yaabi doontaa taariikhdeeda iyo qaab nololeedkooda. Baro si fiican isaga. Taariikhda helitaankan Geedka asalkiisu yahay asal ahaan asal ahaan Koonfur Aasiya wuxuu leeyahay dhowr magacyo oo kale ah oo ay siiyaan dadka maxalliga ah - ubaxa qoyan, lakabyada dhimashada, lebiska dhagaxa, lafa-xayawaanka.
Geedka qajaarka: sifooyinka daryeelka, isticmaalka, guryaha
Tiro yar ayaa maqashay sida warshadani sida cilmi-baarista, iyadoo inta badan qaadatay midhihiisa si ay u noqoto mid qallalan. Aynu ogaanno waxa ay tahay iyo meesha ay dhacdo. Waa maxay cilmi-baarista iyo meesha uu ku korayo Sciencebi waa geed gaaban oo qoyan oo ka mid ah qoysaska. Waxa kale oo loo yaqaannaa geed qajaar ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta cayayaanka 2020